DVLA Kunyoresa | Yangu Mota Kunze
Kunyoresa mota yako muUnited Kingdom
Kugadzirisa mapepa kuti mota yako inyoreswe
Yangu Mota Yekutumira inopa yakazara yakazara sevhisi kuitira kuti mota yako izere UK nzira yakanyoreswa neDVLA. Isu takavaka hukama hwakasimba neDVLA uye tinokwanisa kuona kuti kana uchiunza nesu, kunyoresa kwako kunoitika nekukurumidza uye pasina nyaya. Kunyoresa uye kuyedza zvinodiwa zvinoitwa mukati-medu uye isu tinokwanisa kugadzirisa mota kuona kuti inoenderana nemirau.
Kana iwe uri kuunza mota kubva kuEurope, isu tinoshanda kuti tiwane Chitupa Chekuenderana (kana usati watove nacho chimwe). Gwaro iri rinobva ratsanangura kuti ndezvipi zvinoda kugadziriswa kuti zvienderane nemitemo yekunyoresa mumigwagwa yeUK. Izvi zvinowanzo kuve nemarambi emwenje, chinomhanyisa uye yekumashure mhute mwenje kugadziridzwa. Tinogona kubata mapepa ese kuitira kuti mota yako UK mugwagwa unyoreswe kubva mukuwirirana maitiro, kuenda kuV55 kupinza kunyorera.
Kune zvisiri zveEuropean zvinotengeswa kunze kwenyika, tinobata kupinda kweNOVA mumotokari munyika, kugadzirisa kweIVA uye kuyedzwa kuzere, pamwe neDVLA kunyoresa maitiro.
Ngatibatsirei neyako kunyoresa mota
Chero chero mota yatiri pano kuti ikubatsire nehupfumi hwechiitiko hunouya kubva kupinza zvese kubva kumamirioni-mapaundi supercars kuenda kune asingakoshi mota dzekare.
Unogona here kubatsira nekunyoresa yaimbova mota yeUK?
Kana mota yakambobva kuUnited Kingdom asi yakanyoreswa kune imwe nyika pasi pemahwendefa ekunze, unoitei?
Pasi peEU musika wemotokari wakabudirira maererano nekutenga nekunze. Kufambisa kwemahara kwezvinhu kunoreva kuti mota inogona kutorwa chero kupi mukati meEU pasina zviitiko zvakawanda zvemitero. Kutenda kuSitifiketi cheKuenderana iyo inoisa muyero wemirau yeEU - mota dzinogona kutumirwa nyore nyore muzviitiko zvakawanda kumatunhu akavakidzana.
Chero zvingave zvikonzero nei mota yaimbove yakanyoreswa kuUK iri kudzoka - tinogona kubatsira nehurongwa hwekuinyorazve. Kazhinji kazhinji kupfuura iyo mota ingadai yakashandurwa kuti ishandiswe mune imwe nyika zvakanyanya sezvazvaifanira kunge iri kana yaive nyowani yekuisa muUK.
Saka nekudaro isu tinogona kuita maitiro ekugadzirisa iyo yaimbova UK mota panzvimbo yako uye kuita kunyoresa kweDVLA pachinzvimbo chako.
Imarii yemotokari yandichabhadhara?
Mota muUnited Kingdom dzinoiswa pasi pegore mutero uyo unobhadharwa kuti mota ifambiswe pano.
Mota muUnited Kingdom dzinoiswa pasi pemutero wepagore uyo unofanirwa kubhadharwa kuti mota ifambiswe pano. Izvo zvinoenderana nekuburitswa kwemotokari uye ine akawanda mabhendi kuona kuti chaiyo mutero unobhadharwa.
Pakunyoreswa kwemotokari nyowani muUnited Kingdom, mubhadharo wemutero mumwe chete unofanirwa uye mushure memwedzi gumi nemaviri, iwe unobhadhara yakatarwa chiyero Uku kunodaidzwa kunzi mubhadharo wekutanga wemutero uye wechipiri kubhadhara mutero.
Asi iwe uchabhadhara zvakadii? Zvakanaka, izvi zvinoenderana zvachose nemotokari uye nzira yekunyoresa.
Iyo huru iyo mota yako inoburitsa zvakanyanya ichaita mutengo kumutero. Apa ndipo apo nzira yekunyoresa inogona kukanganisa zvakanyanya mutengo wakazara wekunze kwako.
Dzimwe nguva zvinogona kubatsira kuti uwane kuteererwa pasi pechirongwa cheIVA bvunzo. Mushure mekuyedzwa kweIVA, kuburitswa kunosarudzwa senge kungori pasi kana pamusoro pe1600cc.
Izvi zvakakosha kucherechedza nekuti kana iwe uine rombo rakaringana kuva nechimwe chinhu senge 'Lamborghini Aventador LP 770', ivo vanogadzira ingangoita 450g / km ye co2. Ndezvipi zvingadhura zvakapfuura £ 2000 kubhadhara kwako kwekutanga mutero?
Pasi pechirongwa cheIVA, mota imwechete iyoyo yaizodhura zvakanyanya pamubhadharo wako wekutanga wemitero nekuda kwemaviri mabhendi emutero kupesana nemapoka emitero akawanda. Chaizvoizvo chiri pamusoro pe £ 1700 yekuponesa mune uyu 'muenzaniso' pamwe nemutengo weiyo CoC iyo panguva yekunyora iri £ 900.
Vazhinji vevatengi vedu vanotivimba kuti titore mota dzavo nekuda kwekushingairira kwedu kutsvaga sarudzo dzinodhura kwazvo kunyoreswa kwavo.
Ndokumbira utarise isu tiri isu chete IVA yekuyedza nzira muUnited Kingdom iyo iri yega uye inokwanisa kuyedza M1 kirasi mota.
Une mubvunzo nezve kunyoreswa kwemotokari yako? Usazeze kuzadza fomu yekutora kuti tikwanise kubatsira kumberi.
Zvinodhura zvakadii kunyoresa mota kuUK?
Mari yekunyoresa mota inochinja inoenderana nenzira yekunyoresa, uye nemotokari pachayo. Mari inobhadharwa kuDVLA chikamu chidiki chemutengo wakazara kunyoresa mota.
Chii chinonzi V55?
V55 ndiyo fomu inoshandiswa kunyoresa mota yako muUnited Kingdom. Mushure mekupedza kuyedza kwako kunyorera kunopedziswa panzvimbo yako uye kuendeswa padivi penhamba yako yeNOVA. Isu tinoona kuti kunyorera kwako kwakaringana kudzivirira chero matambudziko anokonzeresa kunonoka kunyoreswa kwemotokari yako. Kana iwe wapinza mota iwe pachako uye uchida rubatsiro nemapepa usanonoka kupinda mukutaurirana.
Chii chinonzi V5C?
Pakubudirira kunyoresa mota yako, bhuku rebhuku rine zvakadzama nezvemota yako rinotumirwa kukero yawakapa. Ichi chikamu chakakosha chevaridzi vemota muUnited Kingdom uye chakafanana nechinyorwa chekunyoresa kubva kunzvimbo dzinotakurwa nemotokari iwe ungadai watipa kana uchinyoresa mota yako.
Unogona kundibatsira here kuti ndiwane Chitupa Chekuenderana?
Kana iwe uchishaya zvinyorwa izvo iyo DVLA inoda kunyoresa mota yako usazeze kupinda mukutaurirana uye isu tinogona kubatsira nekutsvaga imwe kana mota yako ichibva mukati meEU.
Mota yangu haina kuendeswa kuna NOVA?
Kana iwe uri kutsvaga kunyoresa mota yatove muUnited Kingdom uye uchida rubatsiro nekupedzwa kweNOVA yako saka usazeze kuti utaure nesu. Tinogona kupedzisa kuziviswa kwekuuya kwemotokari pachinzvimbo chako.
Ungamhanyisa sei kunyoresa mota?
Isu tinoshanda padhuze neDVLA uye nepo isu tisingakwanise kuvimbisa chero chinhu - nzvimbo yedu ndiyo yega yega yega yeIVA yekuyedza nzira. Izvi zvinoreva kuti tinogona kuwana mota yakarongerwa muIVA bvunzo nekukurumidza kupfuura chero ani zvake, uye zvinoreva zvakare kuti tinoshanda pamwe neDVLA kukunda chero nyaya mukunyoresa kwako.
Iwe unogadzirisa grey kunyoresa kunyoreswa?
Zvisinei nekuti mota yako iri kubva kupi, isu tinogona kubatsira kuinyoresa. Taura kuti utaure nezve ako akasarudzika anodikanwa uye isu tichaisa pamwechete bespoke kotesheni.
Chii chinonzi kunyoresa kure?
Kune huwandu hukuru hwemotokari dzisingade kuuya kunzvimbo yedu. Izvo zvinobatsira kukurumidza kuita kunyoresa nekuda kweiyo yakadzikira huwandu hwezvinhu zvinodiwa. Kazhinji sarudzo yakakurumbira kune avo vane inishuwarenzi yekutyaira mota dzavo kubva mukati meEU vanogadziridzwa mota yavo mugaraji remuno uye tinogona kubatsira nemapepa anodikanwa kunyoresa mota yako.
Zuva rimwe chete kutevedzera mota kweEU dzakagadzirwa mota?
Iyo hombe ruzhinji rwekunze zvinotemerwa kuUK kubva mukati meEU zvinogona kuchinjiswa kune yemunharaunda garaji, uye isu tinogona kupedzisa mapepa. Kuti titore dambudziko kubva pane izvi kunyangwe tichigona muzviitiko zvakawanda kugadzirisa uye MOT mota yako panzvimbo yedu muCastle Donington pazuva rimwe chetero. Izvi zvinoenderana nemotokari saka ndokumbirawo ubate kuti ukurukure zvako zvakasarudzika zvinodiwa.
Ndarasa gwaro rangu rekunyora zita rekunze, uchiri kukwanisa kunyoresa mota yangu?
Isu tinonzwisisa kuti zvinhu zvinorasika nguva nenguva. Zvinyorwa chikamu chakakosha kunyoresa chero mota muUnited Kingdom uye pasina ivo, maitiro ekunyoresa anogona kuve anonyengera. PaMotokari Yangu Kunze, tinobata nenyaya zhinji dzakadai zuva nezuva. Ingo taura nekutaura uye isu tinokutaurisa iwe pakugadzirisa dambudziko. Tinoda kutora mota yako yakanyoreswa nekukurumidza sezvazvinogona kuti unakirwe nemotokari yako muUnited Kingdom.